बैठकमा ओली जाँदै गएनन् भने अब के हुन्छ ? » RealPati.com
बैठकमा ओली जाँदै गएनन् भने अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । आफ्नै पार्टीको आइतबारको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गएनन् । आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि बैठक नै वहिष्कार गरेका ओलीले अब के गर्लान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
आफू अनुकुल निर्णय हुँदा खुशी भएर जाने र विरोधमा निर्णय हुने भए अथवा आफूलाई केही चित्त नबुझे बैठक नै वहिष्कार गर्ने गरेका ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट नै हटाउने अर्को पक्षको योजना सफल होला कि नहोला ? ओलीले सचिवालयको बैठक पनि वेवास्ता गर्दै आएका छन् । पार्टीका सर्वोच्च निकाय मानिएको सचिवालयमा ९ सदस्यमध्ये ओलीका ४ जनामात्र छन् । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने ओलीको अडान यथावत छ ।
प्रचण्डको जवाफ ओलीले पनि दिइसकेका छन् । ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई आरोपपत्रको संज्ञा दिएका छन् । आगामी आइतबार पनि स्थायी समिति बैठक बोलाइएको छ । आइतबार सचिवालयका ४४ जना सदस्यलाई नै दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन अध्ययनको लागि दिइएको छ । ओलीले पार्टीले गरेको कुनै पनि निर्णय नमान्ने भन्दै आएका छन् । ओली विरोधी पक्ष भने पार्टीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बनाएकाले पार्टीले गरेको जस्तोसुकै निर्णय पनि ओलीले मान्नुपर्ने भन्दै आएको छ । मंसिर २५ गते बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि पौष ५ गतेका लागि सरेको छ ।
पार्टीमा कुनै पनि छलफल नगरी ओली एकलौटी ढंगले चलेकाले आलोचना भइरहेको छ ।
नेकपामा जन्मियो नयाँ धार, नेता नेपाल र श्रेष्ठको नेतृत्व
व्यापार घाटा तीन महिनामै साढे तीन खर्ब
सडक छेउछाउ ‘मर्निङ वाक’ गर्दै हुनुहन्छ? श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग निम्तेला
श्रीमानको मृत्युको हल्लापछि श्रीमतीले गरिन आफ्नो र दुई छोराको हत्या
भारतमा कोरोना संक्रमित दैनिक एक लाख कम
साउनदेखि जनगणनाको तयारी
एमाले एकताका बाधक ओली, नेपाल र खनाल : योगेश भट्टराई
१९ वर्षदेखि हजुर आमासँग बस्दै आएका थिए युवक, एक दिन प्रहरी आयो अनि ….
नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या १० पुग्यो
Finding the Best Via the internet Data Posting
कोरोनाबाट पूर्वसांसद बस्नेतको निधन
युवा नेता एवं समाजसेवी सेढांइद्धारा त्रिशूली अस्पताललाई दैनिक ५ सिलिण्डर अक्सिजन प्रदान